Ukutya kwenja zizithako izinto ezingafunekiyo zokwenza ukutya okwenziwa yinja
Uhlobo lweToyile yePellet Mill
Uhlobo lweFet Pellet Mill yeWet
Isibonelelo esikhulu sePellet Mill
Isibonelelo esincinci sePellet Mill
Khupha umatshini wokutya
Umatshini wokuxuba uMphilisi
Umda wemveliso yokondla
Umatshini wokusasaza ukutya kwezilwanyana zasekhaya
Ezinye iiMishini zoMthombo woKondla
umatshini wokutya weinjini yedizili
Cwangcisa umgca wokutya weinkukhu ezi-1PTH
Ukuqulunqwa kokutya kwenja
Umtya omncinci wokuvelisa ukutya
Ukuntywila kwi-pellet yentlanzi e-Negeria
Ukwenza iipellets zokutya kwezilwanyana
Ukwenza ukutya kwezilwanyana zasekhaya
Ukupheka kweepellets zenkukhu
Imfuyo yokutya kwemfuyo
umatshini owenza iintlanzi
i-grinder yomgubo wevidiyo yokutya kwenkukhu
inkukhu ukutya kwepellet yokutya
inkqubo yokutya eyongezelelweyo yevidiyo
izixhobo zokuveliswa kweentlanzi
ukuvelisa ukutya kwesityalo sevidiyo
umthengisi wefa weplastiki wokufa
Izithako zokutya kwenja ziyahluka kuxhomekeka kuhlobo lokutya kwezilwanyana zasekhaya. Umahluko osisiseko phakathi kokutya okwenziwe ngamathumba kunye nokomileyo wesilwanyana sisixa sokufuma. Ukutya okucwangcisiweyo kuqulethe phakathi 70 kwaye 80% ukufuma, kuba ezi zinto zenziwa ngokubanzi kwiimveliso zenyama entsha, Ngelixa ukutya okomileyo kwesilwanyana akukho ngaphezulu 10%. Izithako ezongeziweyo ezisetyenziselwa ukutya okomileyo zibandakanya ukutya okuziinkozo ze-corn, inyama kunye nesidlo sethambo, Amafutha ezilwanyana, kunye neoyile. Ngombala ofana nenyama, ukutya okomileyo kufuna i-amylaceous ethe kratya, okanye izithako zesitatshi.
Nje, sivame ukuthenga inja kubomi bemihla ngemihla kubhekisele kukutya kwenja eyomileyo, okwakutyelwa kukutya kwenja. Olu hlobo lokutya kwenja olwenziwe zizithako ezininzi zokuxubha kuxutywe kwaye emva koko kukhutshwe, kwaye ke yomile, umanzi, incinci, njl., ukufuma kungaphantsi kune 12%. Uhlobo lwentaka eyomileyo yokutya inokugcina ubomi obude, kulula ukugaya kwaye ukufunxa,ukondla okufanelekileyo, ngexabiso eliphantsi. Iya ixhaphaka ngakumbi kwintengiso yokutya kwenja.
Ngokwesiqhelo ukulungiselela inja ukutya ,sinokwakheka ngolu hlobo lulandelayo: Iprotheyini kufuneka ibe malunga ne-32 ~ 38%, i-8% i-12%, i-ash Crude 6%, i-fiber2.8%, i-calcium1.0%, iphosphorus 0.85% kunye nezinye izinto zakwimveliso eluhlaza.it inokuhlengahlengiswa ngokwemeko yendawo yakho .
Uhlobo luni lwezixhobo eziluhlaza ezinezithako esizifunayo ?
Iproteydi e-Crude ihlala iyingqwalaselo ephambili kuninzi lokutya kwezilwanyana ngokuba ngumthombo weebhloko zokwakha kobomi (i.e. Amino Acids). Izinja, okona kutya kuthengiswayo njenge-carnivores, Funa iiamino acid ezifanelekileyo, ezingafunyanwanga konke konke kubhaliso olululo kwimithombo-sityalo enye yeeprotein ezifana nesidlo sembotyi yesoya.Iprotein yaziwa kakhulu ngokubonelela nge-amino acid, okanye iproteit, ukwakha iinwele, ulusu, izikhonkwane, izihlunu, i-tendon, iigaments, kunye noxinzelelo. Ikwadlala indima ephambili kwimveliso yamahomoni.Imithombo yeeproteni yenja-yokutya ifaka inyama, inkukhu, intlanzi, kunye nezinye izithako zezityalo ezinje ngengqolowa kunye nesidlo sombona.
Imithombo eqhelekileyo ye-carbohydrate zizityalo kunye neenkozo. Iicarbohydrate, zihlelwe zangathi zii-starches (iswekile) kunye neentsinga, nika amandla kunye nobuninzi, ngokulandelelana.
I-Starches yenziwa ngeendlela ezahlukeneyo zeswekile, ezinje ngeglucose okanye ipructose. Ngokugaya, izinja zinokuguqula iswekile ibe amandla asebenzisekayo.
Ifayibha inokuthi okanye ingavuthwa okanye ihlulwe ibe ngama-acid amancinci amancinci kunye neebacteria emathunjini enja. Imithombo yefibre enobisi oluphakamileyo, njengeentsini zemifuno, bonelela ngamanani aphezulu ama-acid acothayo amanqatha. Iintsinga ezinobunzima obucothayo, ezinje ngepulpons, ubonelele ngamafutha acothayo kunye neninzi yenkunkuma yokuhambisa inkunkuma. Iintsinga ezinobisi kancinci, njenge cellulose, Nika isambuku esikhulu sokuhamba kwenkunkuma ngokuhamba kwendlela yokugaya ukutya kwaye kuphela ngamafutha acothayo amancinci-amancinci.
Amafutha abonelela ngama-subunits abalulekileyo kumanqatha, omega-6 kunye omega-3 amanqatha acid. I-Omega-6 fatty acids iyimfuneko kulondolozo lwesikhumba kunye nakwikhati kunye nolwakhiwo olufanelekileyo lwe-membrane. I-Omega-3 fatty acids iye yaboniswa ibalulekile ekufunxeni kwegazi kunye nasekunciphiseni ukuvuvukala.I-membrane ephezulu yeseli yenziwe ngamanqatha. Amafutha ayanceda ukugcina ubushushu bomzimba, ukulawula ukuvuvukala, kunye nokuninzi. Amafutha yeyona nto iphambili yamandla agciniweyo emzimbeni, Ukubonelela amandla aphindwe kabini njengekhabhohayidrethi okanye iiprotein.which zifunyanwa kumzimba, inkukhu, intlanzi, kwaye utyale ioyile, njengeflakisi kunye neoyile yemifuno.
Iivithamini zinoxanduva lokukhuthaza ukukhula kwamathambo, ukugcwala kwegazi, imveliso yamandla, kunye nokukhusela i-oxidant.
Iivithamini A, D, E, kwaye i-K ifuna amanqatha ukuze ifakwe emzimbeni, ngexa iivithamini ezinjengeevithamini ze-B kunye neevithamin C zidinga amanzi ukuze zingene emzimbeni.
Iiminerali ibonelela ngenkxaso yamathambo kunye noncedo ekuhanjisweni kwe-nerve kunye nokuqina kwezihlunu.
UMSEBENZI WOKUTYA WOKUGQIBELA
Izinja ziyakwazi ukungcamla izinto ezikrakra, ityiwa, kamnandi, kwaye ndimuncu. Ukuba kukho into enuka inja elungileyo, ngokuqinisekileyo iya kuhla ezantsi. Emva kwesibini siyaluma, ukuthungwa okanye ukunambitheka kungadlala indima, kananjalo.so umzi-mveliso wokutya wenja udla ngokungcamla ukutya kwenja kukhetho oluhlukileyo ukutsala izinja ezahlukeneyo.
Ingama lakho (iyafuneka)
Imeyile yakho (iyafuneka)
Khetha ulwimi lwakho EnglishAfrikaansالعربيةမြန်မာစာNederlandsFrançaisDeutschहिन्दी; हिंदीBahasa IndonesiaItaliano日本語한국어PortuguêsРусскийEspañolKiswahiliภาษาไทยTürkçeTiếng ViệtisiXhosaisiZulu
Iselula / whatsapp / wechat：008618768871537
Idilesi：Indawo yeNdawo yeXingyang,Isixeko saseZhengzhou,Iphondo laseHenan,China
Ilungelo lokushicilela © 2012-2021 Umatshini kaVictor Pellet. Onke amalungelo agciniwe.
Khangela ikhowudi ye-QR ye-wechat